Global Voices teny Malagasy » Ny lalana nizoran’ny vondrom-piarahamonina miditra aterineto: Avy any amin’ny telecentres nankany amin’ny tambajotram-piarahamonina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Jona 2018 5:31 GMT 1	 · Mpanoratra Association for Progressive Communications Nandika Naomy
Sokajy: Fidirana, Mediam-bahoaka, Rising Voices
Tandro-pifandraisan'i Rhizomatica ao Alotepec, Oaxaca, Meksika. Sary avy amin'ny Onion ao amin'ny Wikimedia Commons ary nampiasaina araka ny lisansa CC BY 3.0.
Ity lahatsoratra manaraka ity no faharoa amin'ny fizarana telo nosoratan'i Florencia Roveri avy ao amin'ny Nodo TAU ary nivoaka voalohany tao amin'ny APC News  ka navoaka eto indray noho ny fiarahamiasa ao amin'ny Association for Progressive Communications sy ny Rising Voices. Vakio ato ny lahatsoratra voalohany momba ny telecentres  sy ny lahatsoratra faharoa momba ny tambajotram-piarahamonina .
Ao Meksika, nanampy tanàna miisa 17 ao Oaxaca ao atsimo andrefan'ny firenena ho afa-miserasera ny asan'ny Rhizomatica . Vitan-dry zareo izany tamin'ny fananganana rafitra telefaonin-tsela sy ny fampidirana tetikasam-piarahamonina tompotany niaraka tamin'ireo olona nanoka-tena ho amin'ny fifandraisandavitra tamin'ny fampiasana ny rafitra misokatra Rhizomatica, izay nomena ny maridrefy. Tsangambato eo amin'ny fahafahan'ny vondrom-piarahamonina mitelefaonina izany sady zavabita goavan'ilay fifandaminana.
Tamin'ny taona 2002, Erick Huerta, mpikambana ao amin'ny Rhizomatica, no niantsoroka ny Biraon'ny fahafaha-miditra amin'ny torohay sy ny teknolojiam-pifandraisana ao amin'ny Vaomiera Nasionalin'ny Fampandrosoana ny vahoaka tompotany. Nandritra ireny taona ireny ny governemanta meksikana nanangana telecentres ho ampiasain'ny vahoaka tompotany. “Hitanay fa ny fomba fiasa no olana tamin'ny telecentres, ny fomba nampidirana ny teknolojia tamin'ireo vondrom-piarahamonina. Namoaka boky fanoroana izahay izay nantsoina hoe ‘Fampiasana ny teknolojian'ny Torohay sy ny Fifandraisana (TIC) ho fampandrosoana eny ifotony: Fampandraisan'ny vondrom-piarahamonina an-tanana ny telecentres’. Nahitana fahombiazana tanteraka ny tetikasa izay nifototra amin'ny tetipanorona fitaratra iray tsy nahitana fahombiazana tamin'ny voalohany. Na izany aza, noho ny fampiharana fomba fiasa vaovao dia nanjary azo lovain-jafy izany. Nihetsika niroso tao anatin'ny politikam-pahazoana miditra aterineto natsangana teny amin'ny kianjam-bahoaka, sekoly ary cybercafés ny toerana misy ny telecentres amin'ny maha-politika fampandrosoana azy. Rehefa nandeha ny fotoana dia voaporofo fa tena manandanja izany ary maro ireo asa tsara vita,” hoy i Huerta.
Amin'izao fotoana, nanoka-tena ho amin'ny tambajotram-piarahamonina ny Rhizomatica. “Natsangana tao anatin'ny tanjona hanome fahafahampo ny filàn'ny vondrom-piarahamonina ireny tambajotra ireny, mba ahafahan-dry zareo mampiasa ny tolotra na mahazo sarany ambany. Manana tambajotra ambonivohitra sy ambanivohitra maka ny serasera Wi-Fi izahay ary mizara izany: izay no maodely tsotra indrindra, fa misy ny hafa, tahaka ny iray izay ampiasainay, ampidiranay finday maromaro. Maro ny fanamby: fanazarantena ara-teknika amin'ny fidirana amin'ny teknolojia mety sy mora ampiasaina, tahaka ny najoron'ny LibreMesh, sy ny fanamby ho an'ny tambajotra ho afa-miasa toy ny mpandraharaha, satria tsy manana lisansa ahafaha-manolotra izany servisy izany ry zareo.”
Vato lehibe misakana voatosiky ny Rhizomatica izany, izay mampiseho fa ao amin'ny rafi-piainana voabahan'ny fisainana ara-barotra, dia zava-dehibe tahaka ny asan'ny vondrom-piarahamonina — sy ny famaritana ny fomba fiasa ary ny fanazarana ara-teknika — ny asa fanandrata-teny eo amin'ny lasitrasa ara-politika sy ara-pandaminana (fitsipika).
Raha amin'ny fampitahana ny tambajotram-piarahamonina sy ny telecentres, dia ny fahasamihafana no hitan'i Huerta kokoa noho ny fitovitovizana. “Eo amin'ny telecentres, mihevitra aho fa iray amin'ny fanamby ny fampifantohana ny zava-drehetra amin'ny fanazarana ny fampiasaina azy ireny. Efa mandeha mihoatra izany ny tambajotra amin'izao fotoana izao satria miresaka fahafaha-manao amin'ny fananganana fotodrafitrasa izahay. Amin'ny fotony ny telecentre nanolotra ny fitaovana sy ny fiseraserana amin'ny aterineto. Tamin'izany fotoana izany, niaraka izy roa ireo. Ankehitriny, lasa mahaleotena ny fampitaovana ary mihamaro ny olona manana azy. Tsy voatery mila solosaina ianao fa finday fotsiny dia efa afa-manao zavatra be dia be ianao ary misandrazona (miserasera ao) amin'ny tambajotra. Izay no eritreretiko ho fahasamihafana lehibe. Ny servisy aterineto no atolotry ny tambajotram-piarahamonina voalohany, na dia afa-mandrafitra votoaty aza izany ary mahatratra dingana sarotsarotra kokoa.”
Mandresy lahatra i Huerta fa tahaka ny mpanome tolotra aterineto (ISP na FAI)  kely tamin'ireo andro voalohany nisian'izany, izay nanolorany servisy aterineto tamin'ny fikambanana sy fifandaminana isan-karazany koa ny tambajotram-piarahamonina. “Te-hampitaha ireo tambajotram-piarahamonina amin'ireo mpanome tolotra aterineto izay natolotry ny mpandraharaha madinika tamin'izany fotoana izany aho. APC no mpisava lalana tamin'izany saha izany sady naroina tamin'ny kinasa toy izany. Mila miverina amin'izany zava-niainana izany ianao, mahatakatra izany nitranga, ary ny fomba nandemen'ny tsena azy ireny. Hafa dia hafa ny tantaran'ireo tambajotram-piarahamonina ireo satria miresaka fandrakofam-potodrafitrasa isika izay maharitra kokoa sady tsy nivoatra be tahaka ny rindrambaiko.”
Raha mijery ny hoavy, mitohy ny fampidirana ny vondrom-piarahamonina. “Raha mieritreritra ny hoavy aho dia mihevitra fa raha afa-manasaratsaraka tsara ireo tambajotra ireo araka ny tokony ho izy isika, dia hahita tambajotra maro hofehezim-bahoaka,” hoy ny fehintenin'i Huerta.
Ao anatin'ny tokotanin-teknolojia isan-karazany, hitan'ny vondrom-piarahamonina ary mbola mitohy ny famantarana (fitadiavana) tetipanorona hahazoana miditra amin'ny teknolojian-torohay sy fifandraisana ahitan-dry zareo izay ilainy, ary manao izany ry zareo miaraka amin'ny mpandray anjara hafa vonona hitondra mankany amin'ny lalan'ny fampidirana ny rehetra (tsimialonjafy) sy ny fampandrosoana ara-tsosialy. Fikambanana sy fifandaminana ara-tsosialy, tsy miankina amin'ny fanjakana sy iraisampirenena maro, governemanta maro ary eny hatramin'ny sehatry ny miahy tena aza no nanangana na nanambatra hery tao anatin'ny fanombohan'andraikitra samihafa.
Ao anatin'ireo toe-javatra ireo, manambatra teboka fifantohana roa izay voaporofo fa mety hampiova zavatra ny niainana tamin'ny telecentres sy ny tambajotram-piarahamonina: dia ny fomba nanatonany ny vondrom-piarahamonina sy ny fomba fiasan-dry zareo hamahana ny olana ara-teknolojia. Na dia mifandrohy ara-pamaritana aza ny telecentres sy ny tambajotram-piarahamonina ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo, dia tsy maintsy iverenana jerena indray ny lalana nandalovany, ampidirina ny fahafahan'ny vondrom-piarahamonina tsirairay avy mizakatena.
Ary raha eo amin'ny resaka teknolojia, na dia nampiseho fitoviana sy fahasamihafana aza ireo zavatra anankiroa efa niainana ireo, raha ampirisihana izy reo hampiroborobo ny fampandrosoana ny vondrom-piarahamonina, dia mety hiatrika fanamby sy fifanoheran-kevitra mitovitovy. (Misy) ny fifanenjanana ankehitriny eo amin'ny maodely (roa na maro) izay manaja sy miaro ny zo sady manatona ny teknolojia ho tahaka fitaovan'ny tombontsoa na mahasoa ny vahoaka, sy ireo maodely hafa mampiroborobo ny fisainana ara-barotra, ny fisintonan'ny sehatra miahy tena (ny fitaovana?) ary mampivangongo ho amin'ny toerana iray ny fifehezana sy ny fanarahamaso, ataovy eo amin'ny sehatry ny fitantanam-panjakana anie izany fanadihadiana izany. Ny fifanenjanana tahaka izany dia vahana ao amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fametraham-pitsipika izay na mirona mankany amin'ny vondrom-piarahamonina sy ny zony, na manohana ny sehatra ara-barotra mivangongo. Amin'izay fotoana izay dia mbola eo an-dalam-pananganana ny lalambe mankany amin'ny fisintonana ara-tsosialy ny teknolojia.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/30/122162/
 nivoaka voalohany tao amin'ny APC News: https://www.apc.org/en/news/pathway-towards-community-access-telecentres-community-networks
 lahatsoratra voalohany momba ny telecentres: https://rising.globalvoices.org/blog/2018/06/26/telecentres-serve-as-spaces-in-which-communities-share-new-technologies/
 lahatsoratra faharoa momba ny tambajotram-piarahamonina: https://rising.globalvoices.org/blog/2018/06/26/community-networks-empower-the-unconnected-to-fight-for-the-right-to-connectivity/
 mpanome tolotra aterineto (ISP na FAI): https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_service_provider